နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၆) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on December 9, 2014 at 15:16 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြောတွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ dialogues တွေဖြစ်ပေမဲ့ စံနစ်တစ်ကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။
ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာ အံ့အားသင့်တာကို ဖော်ပြတဲ့အသုံးအနှုန်းများကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ situational dialogue ကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
Allen: Haven't I seen you somewhere before? (ငါမင်းကို တစ်နေရာရာမှာမြင်ဖူးသလိုပဲနော်)
Julia: No, I don't think so. (မဟုတ်ပါဖူး။ ကျွန်မတော့ဒီလိုမထင်ဘူး)
Allen: But your face is so familiar. Waitasecond .... I know .... We were on the same flight to New York last month. (ဒါပေမဲ့ ညီမမျက်နှာကို ရင်းရင်းနှီးနှီးသိနေတယ်။ နေပါအုံး - သိပြီ - အရင်လက နယူးယောက်ကိုသွားတဲ့လေယာဉ်တူတူ စီးဖူးတယ်လေ)
Julia: Oh, yes. Now I remember. Whatacoincidence to meet in San Francisco! (အိုး - သိပြီ။ ကျွန်မမှတ်မိပြီ။ ဆန်ဖရန်စစ်စကိုကိုပြန်တွေ့တာ တကယ်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ)
Allen: Well, you know what they say - it'sasmall world. (ဟုတ်ပါရဲ့ - လူတွေပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ - ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါရှင်)
Negative question ဖြစ်တဲ့ Haven't I seen you somewhere before? ဟာ I’ve seen you somewhere before, haven't I? နှင့်ညီမျှတယ်။ စကားပြောသူဟာ သူ့ထင်မြင်ချက် မှန်တယ်လို့ယူဆရင် ဒီလိုသုံးလေ့လည်းရှိပါတယ်။ "ငါမင်းကိုမြင်ဖူးတယ် မဟုတ်လား"ပေါ့။
"Whata… "
ဒါက အံ့ဩတာ ဝမ်းသာတာ စိတ်ပျက်တာ စတဲ့ ခံစားချက်တွေ ကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ exclamation ဖြစ်ပါတယ်။ What a… ရဲ့အသုံး ဥပမာတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Whatasurprise to see you here! (မင်းကိုဒီမှာတွေ့ရတာအံ့ဩစရာပဲ)
Whatajoy to have you with us! (မင်း ငါတို့နဲ့တူတူရှိနေတာ တကယ်ပျော်စရာပါ)
Whatamisfortune! (ကံဆိုးလိုက်တာ)
Whatashame that you have to leave so soon! (ခင်ဗျာဒီလိုစောစောပြန်ရတာ မမိုက်ဘူးဗျာ)
Whatapity she couldn't come! (သူမ မလာနိုင်တာစိတ်မကောင်းစရာပဲ)
Whatawonderful idea that is! (သိပ်ကောင်းတဲ့အကြံပဲဗျိုး)
You know what they say ဟာ you know the saying နှင့်ညီမျှတယ်။ "They" ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကိုယ်စားမပြု ဘဲ general အဖြစ်နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေး တဲ့။ Native speakers တွေအသုံးများတဲ့ common saying လေးတစ်ခုပါ။
အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် တောင်းပန်ချက်ကို ဖော်ပြခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း
အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို ယဉ်ကျေးစွာ အဆုံးသတ်နည်းများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ...
Permalink Reply by Aung Win Naing on December 9, 2014 at 16:52
Permalink Reply by Dr Soe Thein Htike on December 9, 2014 at 18:36
Permalink Reply by Naing Linaung on December 9, 2014 at 20:48
It is very usuaful to me.So thank.
Permalink Reply by myintzu thin on December 10, 2014 at 9:38
Permalink Reply by Thin Thin Su on December 10, 2014 at 10:46